Ingxoxo yevidiyo yeRoulette
I-roulette yengxoxo yevidiyo. Zonke izingxoxo zevidiyo kusayithi elilodwa
Ukukunakekela, sidale i-roulette yengxoxo elula! Isiza sethu sisetshenziswa yizinkulungwane zabahlali bomhlaba. Ukuze usijoyine, udinga ikhompyutha kuphela enekhamera ne-inthanethi. Ngemuva kokubhalisa, ungaqala ukufuna okhulumisana naye ukuxhumana naye. Ingxoxo yevidiyo izomema izinkulungwane zabantu ukuthi zixoxe. Uzokwazi ukuthola abangane abasha noma uthande ngokusebenzisa umgomo we-roulette.Sicela wazi futhi ulandele imithetho yethu yokusebenzisa insiza. Yenzelwe ukuxhumana ngokunethezeka.
Kuleli sayithi sizamile ukuqoqa zonke izingxoxo zamahhala ze-roulette ezingadingi ukubhaliswa. Inhloso yethu bekuwukwethula izingoma ezifana neChatroulette. Noma, njengoba sikubiza ngokuthi i-Russian chatroulette, ingxoxo engahleliwe. Isevisi yokuphola inamagama amaningi afanayo. Wonke umuntu uzozitholela isihloko sengxoxo esifanele. Lapha ungaxoxa nje, uthole umngani noma intombi. Qala ubudlelwano obunzima noma uzikhawulele kwikhamera yewebhu ebonakalayo. Ngenxa yalokhu, sinqume ukwethula izingxoxo ezahlukahlukene nge-interlocutor engahleliwe. Yebo, sinamakamelo okuxoxa anengqikithi engagwegwesi. Uma ungaphezu kweminyaka engu-18, lapho-ke ungaya engxoxweni enjalo ukuze uzitholele umlingani ongahleliwe.
Zonke izingxoxo zevidiyo eRussia nasemhlabeni.
Ngokuya kunoma iyiphi ingxoxo yevidiyo engahleliwe etholakala kuwebhusayithi yethu, ungazitholela kalula abantu abanezintshisekelo ezahlukahlukene. Umngeneli angaba yinoma ngubani. Indlela abantu abeza ngayo kithi bevela emazweni ahlukene. Ngoba nje izingxoxo zevidiyo ezithandwa kakhulu emhlabeni ziqoqiwe lapha.
Amazwe amakhulu yi: United States, Germany, Spain, Russia, Ukraine, France.
Sizamile ukuqoqa cishe zonke izingxoxo zevidiyo lapho ukubhalisa kungakhethwa khona noma kusemthethweni. Kungakho singashicilelanga iChatroulette yangempela. I-roulette yengxoxo idinga ukubhaliswa, kanye nemithetho eqinile, futhi konke kwenzeka lapho ngesisekelo esikhokhelwayo.
Ingxoxo yevidiyo yenzelwe ukuphola nokuxhumana. Yadalwa ngesisekelo se-roulette yaseRussia, yingakho igama elithi "I-Video Chat Roulette". Ukhetha okhulumayo ngokuswayipha ingxoxo ye-roulette, bese uyimisa kumxhumanisi okhethwe ngokungahleliwe. Bese ukhuluma nalowo owaphuma ngalesi sikhathi noma uqale ingxoxo futhi. I-roulette yengxoxo iyajabulisa kakhulu. Ungahlangana nabantu abaningi ngobusuku obubodwa. Thola izindaba zakamuva mathupha. Kukhona i-snag eyodwa ngempela, uma ufuna ukuxhumana nabantu abavela emazweni ahlukene, kuzodingeka ufunde okungenani isiNgisi. Futhi kulabo abasayifunda nje, ukuxoxa ngevidiyo kuzoba umkhuba owengeziwe wolimi. Ungafunda futhi usebenzise olunye ulimi lwangaphandle. Akunandaba kunoma ngubani ongafunda kuphela ulimi lwabo lwendabuko. IRussia inkulu, futhi abantu abakhuluma isiRashiya bakhulu kakhulu!Esizeni uzothola ukuthi uzohlala nobani kusihlwa. Umbuzo: Ungathandwa kanjani kuVideochat futhi udume? Impendulo: ukuzijayeza nokwenza okuningi! Lapha udinga ukuqonda nobani futhi nini lapho kufanele ukhulume khona, nokuthi kuphi lapho kufanele uthule khona, ungahlekisa kuphi, nokuthi unganikeza kuphi iseluleko esisebenzayo nesibalulekile. Phatha umuntu osebenzisana naye ngenhlonipho, noma ungahlelile ukuxhumana naye ngokuqhubekayo. Landela imithetho yokuziphatha okuhle. Uzojabulela ukuthola ukuthandwa engxoxweni. Ukuhlangabezana "nesiphetho sakho" kungxoxo yevidiyo - inganekwane noma iqiniso?Uzojabulela ukuthola ukuthandwa engxoxweni. Ukuhlangabezana "nesiphetho sakho" kungxoxo yevidiyo - inganekwane noma iqiniso?Uzojabulela ukuthola ukuthandwa engxoxweni. Ukuhlangabezana "nesiphetho sakho" kungxoxo yevidiyo - inganekwane noma iqiniso?
Ingxoxo yevidiyo - izici zokuxhumana
Abafana namantombazane abavela emazweni ahlukene bafuna i-interlocutor ethokozisayo lapha, umphefumulo wabo womlingani, noma okungenani ingxoxo yevidiyo yamahhala. Imvamisa, bathola i-interlocutor yabo esondweni le-roulette, ibizwa nangokuthi i-chatroulette. Ngendlela, ngeke ngikhohlwe ukusho ukuthi futhi sinengxoxo yamahhala yaseRussia. Zonke izingxoxo zevidiyo kusayithi elilodwaukuze ukwazi ukuxhumana nabantu abahlukene mahhala futhi ngaphandle kokubhalisa. IChatroulette ibhekwa njengesevisi ethandwa kakhulu, kepha ikude nokuhamba phambili. IChatroulette.com inabalingani abaningi. Futhi kwesinye isikhathi abekho ngaphansi kuye ngekhwalithi nenani labangeneleli. Kukhona i-analogue yeChatroulette eRussia, futhi kumahhala ngokuphelele. Ngingathanda ukukufisela ukuxhumana okuhle nabafana namantombazane amahle. Manje kunezimo eziningi lapho umbhangqwana oshadile, ukhuluma ngabantu obaziyo, uthi: "Sahlangana kwi-Intanethi." Yebo, bayazana, bese behlangana emhlabeni wangempela, bese beshada futhi bahlala ndawonye. Konke lokhu kuyiqiniso ngempela! Izindaba zangempela zabantu bangempela! Nawe, ungahlangana ngephutha nomphefumulo wakho noma uqale ukumfuna. Unganqikazi - akekho ozokuluma lapha ngekhamera. Dala umoya ofanele ukuze oxhumana naye aqondeukuthi uzimisele.
Bhalisa engxoxweni yevidiyo ukuze uchithe ubusuku obuthandekayo lapho. Lapha ungazijabulisa ngaphandle kokushiya ikhaya lakho ngaphandle kokusebenzisa imali. Uzoba nabantu obaziyo abasha, izingxoxo ezimnandi, uzokwazi izindaba zakamuva. Kungani ngobuwula ungahlala phambi kwe-TV ubusuku bonke ube ukwazi ukukhuluma nabantu bangempela? Yebo, kunesimo sezulu esibi ngaphandle, kepha kwesinye isikhathi awekho amandla ngemuva komsebenzi, futhi ingxoxo yevidiyo izosiza lapha. Okuhlala kuseduze futhi amakhulu ezinkulungwane zabantu asevele ekulungele ukuxhumana nawe! Inhlanhla kwezokuxhumana nabantu engibaziyo!
Ukuqomisana kwevidiyo yaseMoscow
Ngingathanda ukukulethela insizakalo entsha yokuphola yabahlali baseMoscow nesifunda saseMoscow. I-roulette yengxoxo yevidiyo ingukuxhumana ngekhamera yewebhu. Phambi kwakho impela umuntu okhuluma naye.
Abafana namantombazane bayazi inzuzo yokuxoxa ngevidiyo. Kuseqinisweni lokuthi awuyithengi ingulube ngesizumbulu. Ngihlangane nomuntu engxoxweni futhi izincwadi zakho zihlala izinyanga. Nishintshana ngezithombe, nichitha isikhathi nomunye. Futhi isikhathi siyinto eyigugu kakhulu esinayo. Uma kufika isikhathi sokuhlangana, okungenani awutholi ngaso sonke isikhathi lokho othenjiswe kona. Futhi abangane kamuva bathi lesi isithombe semodeli ethile yaseNorway. Sikunikeza ingxoxo yevidiyo yaseMoscow yokuqola amantombazane nabafana. Manje usungasebenzisa izinsizakalo zengxoxo yevidiyo eyinhloko. Sesha amakhasi ethu.
Namuhla abantu abaningi ngokwengeziwe bayazana, baxhumana, benze abangane futhi baqale ubudlelwane obunzima, abahlangane cishe. Kulula ngaleyo ndlela. Indoda enesizotha kungenzeka ingayazi intombi yayo, kepha cishe, kususwe imingcele eminingi, kunciphise ukwesaba, ukuzethemba okwengeziwe. Ukuxoxa ngevidiyo akubandakanyi nje ukukhuluma ngamazwi kuphela, kepha nokuthi uzobonakala ngamehlo akho, kubhekwe, kuhlolwe njengoba ungumxhumanisi wakho. Zama ukudala ukuhleleka egumbini lakho. Shintsha ukubukeka ukuze uthakazelise osekhulumisana naye. Kulolu daba, izinto esihlokweni ebengifuna ukukhuluma ngazo zizosiza. Mhlawumbe asikho isifiso sokubukwa. Kulokhu, ungaguqula ukuze kungabikho muntu okwaziyo. Noma sebenzisa izinhlelo ezikhethekile zokulungisa ezizokusiza ucishe ushintshe noma ufihle ukubukeka kwakho.
Ukuze kube lula nokuxhumana kalula kwi-Intanethi, sethule zonke izingxoxo zevidiyo sisebenzisa umthetho we-roulette kusayithi elilodwa. Ngakho-ke ukuxhumana kuzotholakala kalula futhi kube lula kubantu abaningi abafuna abakhulumayo.
I-roulette yengxoxo yasungulwa eminyakeni engaba ngu-5 edlule. Lolu hlobo lokusesha umngani luthola ukuthandwa kuphela. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezingxoxo zamavidiyo minyaka yonke. Yilokhu okusenze saqoqa amasampula athakazelisa kakhulu kwezokuzijabulisa kwakho.
Ingxoxo yevidiyo ivakashelwa yizinkulungwane zabangeneleli abavela emazweni ahlukahlukene. Imithetho yokusetshenziswa ilula kakhulu, ngakho-ke ukuqaliswa kwayo ngeke kubangele ukungakhululeki. Ingxoxo yevidiyo yadalwa kusetshenziswa umgomo wokukhetha okungahleliwe komlamuleli. Ngakho-ke, kwathiwa: Chatroulette, nangesiRussia - "ingxoxo ye-roulette". Kwanele ukuba nekhamera yewebhu, isikhathi esincane samahhala nemizwa yokuxhumana ngezihloko ezahlukahlukene.
Umsuka wengxoxo yevidiyo ye-roulette uvela eMoscow, lapho umdali wayo ake ahlala khona. Manje wonke amazwe anenani okungenani elilodwa, i-analogue yayo eyi-Chatroulette. Kwezinye izinhlobo zama-roulettes, ungahlunga ngobulili, ngokwesibonelo, ngokukhetha amantombazane kuphela.
Emphakathini, i-Intanethi ibaluleke kakhulu. Abantu bavame ukukhetha ukuxhumana okubonakalayo kunokuxhumana okubukhoma. Isifiso sabo siyaqondakala. Lapho uxhumana, isibonelo, nge-webcam, kulula kakhulu ukushintsha okhulumayo uma ngasizathu simbe engamfaneli. Ngicindezele inkinobho "ngokulandelayo" futhi kukhona okhulumisana okusha phambi kwakho. Kungenxa yalokhu ukuthi i-roulette yengxoxo yevidiyo ifumbathisa abalandeli bayo.
Ukuqomisana ku-roulette yengxoxo sekuyinto ejwayelekile. Abantu bayazana, bese bevakashelana. Kwabaningi, ukuthandana ngamehlo kuyindlela entsha yokuxoxa. Kwabanye, kuyindlela nje yokudlulisa isikhathi bese ulingisa amanye amalungu.
I-Chat Roulette yokubambisana
I-Roulette yengxoxo yevidiyo 18+ - kuzoba inketho enhle kakhulu yokuphumula ngisho nabantu abamatasa kakhulu. Uma unesikhathi esincane samahhala futhi unentshisekelo yokuthandana, ungaphuthelwa ithuba lokuzama ingxoxo yethu eku-inthanethi, lapho kwesinye isikhathi kwenzeka izinto ezijabulisa kakhulu. Ngisho nangaphandle kokushiya ikhaya, ulele kusofa onethezekile, ungazitholela nje isikhulumi esibonakalayo esikhangayo. Ngezithameli eziningi zabasebenzisi, uzohlala unezinhlobonhlobo. Zikhethele uthando oluku-inthanethi olusha nsuku zonke futhi ungadinwa.
I-Roulette Yezocansi: Izimfihlo Zokuxhumana
Akuyona imfihlo ukuthi ukuxhumana ngesihloko kungenye yamagugu amakhulu kunoma yimuphi umuntu. Ngaphandle kokuxhumana kwikhamera yewebhu, akukho nqubekela phambili ekuvuthweni okusondelene, ukuxhumana okungokoqobo nabobulili obuhlukile online kusiza ukuxazulula izinkinga eziningi, ukuba nesikhathi esimnandi ndawonye, ​​futhi kuyingxenye ebalulekile yomsebenzi wethu, isifundo kanye nempilo yomuntu siqu.
Xoxa nomngane okungahleliwe ukusondelana
Impilo esondelene yanamuhla yinto eyinkimbinkimbi kakhulu. Abantu abasha, belwela ukuzenzela umsebenzi omuhle, kwesinye isikhathi bayakhohlwa ukwakha impilo yomuntu siqu nokwenza abangane, bengenaso isikhathi sokuqala umndeni nokubukela kaningi. Le ndlela yokuphila, yeqiniso, incisha ukuxhumana okuhle ukuze phumula ngokweqiniso futhi uphumule. Uma isizungu sikuthikameza, unamahloni wokujola empilweni yangempela, sekuyisikhathi sokuthola i- roulette yengxoxo yevidiyo emangalisayo nomngane ojwayelekile wokusondelana .Lapha, ukuphola ngo-18 + kwi-Intanethi kulula kakhulu, ngoba wonke umuntu obona ngakolunye uhlangothi kwesikrini unentshisekelo kwezokuxhumana ezithokozisayo nakubantu obajwayele abasha, abaningi bavele baye eroulette ukuze baxoshe bukhoma babukane emehlweni besebenzisa ikhamera yewebhu. Inani elikhulu labantu lokuhlukahluka kokunambithekayo nemibala kuzokwenza kube lula ukuthola okhulumisana naye ngendlela oyithandayo futhi ube nengxoxo emnandi ethokozisayo naye noma umane.Abaningi abaye bazama ukuphola kwi-webcam engxoxweni sebethole abangane abasha abathembekile abavela emazweni ahlukahlukene futhi bathola nomphefumulo womlingani. Musa ukuchitha isikhathi sakho, ngena nje ube nesikhathi esimnandi, uqede isithukuthezi ingunaphakade.
Abantu abaningi bakhetha i-roulette yethu yengxoxo yevidiyo futhi yingakho:
- Ilula futhi ngasikhathi sinye ukuphola okujabulisayo kokusondelana- Inani elikhulu labantu lihlala livulekele izingxoxo ezithokozisayo ngesihloko - Ithuba elihle kakhulu lokuxoxa nje ngokungaziwa, lapho kungekho muntu ozokubona futhi abuze ngalowo wakho- Thola owangaphandle abangani ngisho nomlingani womphefumulo ngokubonakalayo okuvamile kwikhamera yewebhu noma bukhoma- Ithuba elihle kakhulu lokususa amahloni, funda ukuxhumana nabobulili obuhlukile ngemodi ebukhoma- Ithuba elithengekayo lokuxhumana ngokuxhumana ngevidiyo ngesikhathi sangempela ngenombolo engenamkhawulo wabantu, khetha ubulili kanye nezintshisekelo ezisondelene zomuntu okhulumisana naye noma okhulumisana naye
I-Roulette yabantu abadala - Thola ukuxhumana okufinyeleleka ngendlela entsha!
Isikhathi sesivele sidlulile lapho sajwayelana nosizo lwe-SMS enezithonjana ezipholile nezithombe. Ifomethi yombhalo ilula, kepha futhi inezinkinga zayo. Uma uxhumana nomxhumanisi obonakalayo, awusoze waqiniseka ngobuntu bakhe bangempela. Ama-akhawunti angumbombayi enza abantu abaningi badumale ekuxhumaneni. Ukujwayelana kwe-Webcam nabantu abangahleliwe abakulungele ukuba nqunu, nokho, kushiya ngokuphelele lesi sikhathi. Ngenxa yokuxhumana ngevidiyo, abasebenzisi bezingxoxo ze-roulette babonana ngesikhathi sangempela futhi babonise imizwa eqotho phakathi nengxoxo. Le yiyo yonke leyo fomethi entsha yokuphola online enikeza okuvelayo okuhluke ngokuphelele kumuntu futhi ekuvumela ukuthi umazi kangcono.
Ukuxhumana kungenye yezidingo zomuntu ezibalulekile. Ingxoxo yeRoulette iyindlela entofontofo futhi ethuthukile kwezobuchwepheshe yokuxhumana nabantu abaningi abanentshisekelo abavela kuwo wonke umhlaba ngokuxhumana ngevidiyo. Iphrojekthi ihlanganisa izinkulungwane zabasebenzisi futhi isesimweni sokuthuthuka njalo ukwenza ukuxhumana kwakho kube lula, kukhanye futhi kuthakazelise.
I-roulette yengxoxo ngezindlela eziningi idlula amandla wezingxoxo ezijwayelekile, ivumela abaxhumanisi ukuthi baxhumane ubuso nobuso, kunokuxhumana okungekho emthethweni nokungafani nomuntu. Uma ungenayo i-interlocutor ethile engqondweni, ungahlala uthola umlingani omthandayo ngokuskrola kubasebenzisi abakhona ku-inthanethi njengamanje. Ngakho-ke igama lengxoxo - i-roulette, ngoba kuhlale kunomphumela omangazayo (ngeke wazi ukuthi ngubani ozomthola efasiteleni elilandelayo).
Ukuxhumana kusayithi, uma kufiswa, kungaziwa ngokuphelele, ngakho-ke abasebenzisi bangaziphatha ngokukhululeka (ngokwesizathu, kunjalo), ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi umphakathi uzocabangani ngabo. Kwezinye izingxoxo ku-roulette, kuvezwa intelezi yomuntu yangempela, uzibonakalisa njengoba enjalo, okungenzeki ngaso sonke isikhathi ngisho nasenkampanini yabantu abaseduze.
I-roulette yengxoxo inikeza abasebenzisi ngamathuba ayingqayizivele okuxhumana futhi inezinzuzo eziningi ezibalulekile ngaphezu kwezinsizakalo ezijwayelekile eziku-inthanethi.
I-roulette yengxoxo kulula
Ukuze uqale ukuxhumana, akudingeki udlule ekubhaliseni okuyinkimbinkimbi. Kwanele ukuvula ikhamera yewebhu bese uqhafaza inkinobho ethi "Thola umngane". Konke ukusebenza kukhululekile ngokuphelele, ayikho imisebenzi efihliwe kusayithi. Umlingani wezokuxhumana uzoxhuma cishe ngaso leso sikhathi, ngaphandle kwalokho, ukuthandwa kwensizakalo kukhula nsuku zonke kanye nesisekelo sabasebenzisi abasha. I-roulette yengxoxo iyindlela elula nephephile yokuhlangana nabantu abasha nsuku zonke.
Ukuba lula nokushesha kokuphola
Abantu abaningi bakuthola kunzima ukuya kumuntu emgwaqweni bese bethembisa ukuhlangana, ikakhulukazi kummeleli wobulili obuhlukile. Le yindlela esihlelwe ngayo - akuwona wonke umuntu obabazekayo ngesimo sengqondo, futhi izindlela eziningi zenhlalo zenza abantu bangazani. Ukuvela kwamanethiwekhi okuxhumana nabantu kwenze lula inqubo yokuphola, kepha akuxazululanga inkinga - iningi labasebenzisi lixhumana lapho nombuthano ocacile wabangane babo nabantu ababaziyo abasuka empilweni yangempela, futhi bayaxwaya iziphakamiso ezintsha. Ku-roulette yengxoxo, isimo sihluke ngokuphelele - abasebenzisi bangena ngenhloso ethile yokuhlangana nokuxhumana nabantu kuze kube manje abangaziwa ngokuxhumana ngevidiyo. Kulula kakhulu ukwenza ukujwayelana okuthakazelisayo nomuntu obukele ukuxhumana.
Ukuvalelisa kulula njengokuthola umuntu othile
Umuntu ngamunye umuntu ngamunye - ngokuya ngokuthanda, izintandokazi, ubumnene, isimilo. Imvamisa umbono wokuqala uyakhohlisa, futhi umuntu omjwayele omusha akusiye lowo odingekayo ekuxhumaneni okuthakazelisayo. Uma kwenzeka ukuhlangana emgwaqweni noma kwezenhlalo. amanethiwekhi, ungathola kuphela ngosuku lokuqala, futhi ukuze uhlukane nomuntu ongafanele kuzodingeka uhlele ingxoxo engathandeki. Ku-roulette yengxoxo, mane uchofoze inkinobho "Okulandelayo", bese kuthi ngomzuzwana olandelayo uhlangane nomxhumanisi omusha.
Ukuxhumana nge-inthanethi kulula kakhulu ngekhamera yewebhu
Ayikho indawo yokuphola engabona umuntu ngokushesha okukhulu njengokuxhumana ngevidiyo. Ngokufika kwengxoxo ye-roulette, akusekho ndawo yokuchitha isikhathi ekubhaleni okomile futhi okuyisidina, ngoba ungabona ngokushesha umuntu omjwayele bukhoma bukhoma. Ngaphezu kwalokho, kunenani elikhulu labakhohlisi kunethiwekhi abazenza ukuthi bangobani ngempela, basebenzisa ama-akhawunti mbumbulu anedatha nezithombe zabanye abantu. Engxoxweni yevidiyo, lokhu kuziphatha akufakiwe - akunakwenzeka ukukhohlisa ividiyo ngesikhathi sangempela.
Kuphephile futhi kuzolile
Imithetho yokusebenzisa ingxoxo yevidiyo ilawulwa ngokuqinile, futhi ukuziphatha okuyihlazo kujeziswa kanzima. Umuntu onokhahlo kwabanye abasebenzisi futhi ngazo zonke izindlela ophula imithetho yomphakathi yenhlonipho kungekudala uzovinjelwa abaphathi. Iningi labasebenzisi bale nsizakalo ngabantu abahle, abanomusa nabanomqondo ovulekile. Uma ungathandi umuntu - vula i-roulette ebonakalayo ebheke kubantu obaziyo abasha!
Ithi "Cha!" isizungu
Uma uzizwa unesizungu, futhi akekho noyedwa umuntu oseduze ongaxoxa naye nje, ungazami ukugxila. Vula i-roulette yengxoxo bese uxoxa ngokuthanda kwakho. Abasebenzisi abaningi bayaqaphela ukuthi ngemuva kwemizuzu embalwa yokuxoxa ngevidiyo nabantu abahlukile, akusalanga ngisho nomkhondo wokudabuka okudala. Futhi ukungaziwa kwabasebenzisi nokugcinwa kuyimfihlo kwezokuxhumana kukuvumela ukuthi wabelane ngokusondelene kakhulu nabantu obajwayele futhi nijabulele ukuxhumana ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.
Ngena ezweni lokuxhumana okuthakazelisayo ne-Vichatter yengxoxo yevidiyo eku-inthanethi
Woza ngapha eWichatter! Lapha uzoba nokuxhumana okubukhoma nezinkulungwane zalabo, njengawe, abaphupha ngezinto ezijabulisayo. Vele uvule ikhamera bese ujabulela ulwandle lwemizwa enhle futhi enhle manje!
Cabanga ukukwazi ukuxhumana nabantu abavela kuwo wonke umhlaba! Ungakhetha noma iyiphi ifomethi yokuxhumana. Imilayezo eyimfihlo? Ikholi yevidiyo? Konke kusezandleni zakho. Zama ingxoxo yevidiyo yamahhala ngaphandle kokubhaliswa, futhi uma ngokungazelelwe ukhathala ngekhamera, vele uyicime futhi ubuke okwenziwa abanye! Kuyathakazelisa? Kusenjalo! Bhalisa futhi ujoyine izikhundla zalabo asebevele basijabulela isikhathi sabo eVichatter.
Usabheka izithombe nokuthumela imiyalezo?
Kepha ngabantu bangempela kumnandi ngokwengeziwe! Njengamanje, joyina isixuku sezingxoxo zevidiyo ezimibalabala ezivela kuwo wonke umhlaba. Xhuma ukuze uxoxe wedwa noma nabangani. Vula ikhamera bese uziveza! Noma ungenza ngaphandle kwakhe: cabanga nje, ngoba abanye benu abaniboni. Bheka ukuthi benzani engxoxweni yevidiyo yeWichatter!
Amathuba amaningi ngekhamera nemakrofoni
Unalo ithalente? Ngakho shesha ukutshela ngakho! Esikhundleni salokho, vula ikhamera bese uzenzela owakho umbukiso wevidiyo, ukumangala, thola amaphuzu, imiklomelo, futhi ukale abanye abahlanganyeli. Yiba inkanyezi ye-Intanethi, kulula futhi kulula ngohlelo lokusebenza lokuxoxa ngevidiyo ephathekayo.
Dlala futhi unqobe
Hlanganisa ukuxhumana okubukhoma nesifiso esibukhoma esijabulisayo!
Ukuhambela izingxenye ezahlukahlukene zevidiyo yokuxhumana nabantu nokubuka ukusakazwa kwevidiyo okuthakazelisayo, ungaqoqa izipho nempumelelo ephelele. Linganisa amathalente abanye ababambiqhaza bese ukhombisa okwakho. Thola ukuthandwa futhi uthole ababhalisile. Futhi uma ungathandi umuntu - sebenzisana naye usebenzisa "amandla amakhulu"!
I-roulette yengxoxo. Zonke izingxoxo zevidiyo
I-roulette yengxoxo yevidiyo yenzelwe ukuxhumana phakathi kwabasebenzisi be-Intanethi abakhuluma isiRashiya. Ukuxhumana kwikhamera yewebhu kwenziwa ngokungahleliwe. Kunokuhlukahluka okuningi kubo kukhathalogi yethu yezingxoxo zevidiyo. Uhlala unokuningi ongakhetha kukho.
Ingxoxo ye-roulette eku-inthanethi
Ingxoxo yeRoulette iyindlela yokuxhumana yabasebenzisi abakhuluma isiRashiya abavela kuwo wonke umhlaba. Vele, ingxoxo yethu eku-inthanethi ivakashelwa abafana namantombazane abavela eRussia nasenhlokodolobha yayo iMoscow. Futhi nenhlokodolobha esenyakatho, eyiSt.
Kepha ngaphandle kwalokho, abantu abavela emazweni ahlukahlukene basebenzisa ingxoxo. Abakhulumeli abakhulu abayizikhulu ngabantu abavela emazweni anjenge: Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, Estonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia ne Kyrgyzstan.
Kuyini ukuxoxa ngevidiyo nomngane ongahleliwe? Lokhu akukhona nje ukujwayela okusha kwabantu, kodwa ukuxhumana okugcwele, kanye nokushintshaniswa kolwazi nalabo abakude kakhulu. Ungakhuluma ngenhliziyo noma utshele ihlaya. Memezela uthando lwakho ebuhleni ohlangana nabo. Kungani enhle? Angaba ubani omunye? Ngempela, phakathi kwamantombazane aseRussia awutholakali enhle. Kepha, amantombazane aseRussia onke ayisihloko esihlukile. Izingxoxo zevidiyo zeRoulette, ezisuselwa kumgomo wokusesha okungahleliwe kwesikhulumi, ngokushesha zanqoba izinhliziyo zabantu. Yini oyidingayo ukuqala ingxoxo ngekhamera yewebhu nemakrofoni? Okokuqala, iya kusayithi lethu, ngoba kuphela ikhathalogi yezinsizakalo zamahhala zokuxhumana. Isinyathelo esilandelayo ukuvula ikhamera yewebhu, ukuyilungiselela. Ngemuva kwakho konke lokhu, cindezela inkinobho START. Ingxoxo yevidiyo iqale.
Ngaso sonke isikhathi lapho i-interlocutor izokuxhuma. Kukuwe ukuthi unquma ukuthi uyathanda noma cha. Umngeneli ukhethwa yicala. IBongakams online yakhelwe ngendlela yokuthi ungeke wazi kusengaphambili ukuthi ngubani ozokhuluma naye olandelayo.
I-roulette yengxoxo yevidiyo 18
I-roulette yengxoxo yevidiyo ingxoxo yekhamera yewebhu. Wonke umuntu omusha ongamazi engxoxweni ye-roulette unezimo ezicishe zifane. Unelungelo futhi lokuphazamisa ukuxhumana nawe kwikhamera yewebhu. Ngakho-ke, akufanele wenze izenzo zokuxhamazela. Ngemuva kokuxhuma, kuyenzeka ukuthi ubhale imilayezo, usakaze ividiyo kusuka kwikhamera yakho yewebhu kuwo wonke umuntu. Iwebhusayithi ye-runetka ayaziwa njengoba injalo ngaphandle kokubhaliswa. Ukuqomisana nokuxoxa kuphela namantombazane amahle aneminyaka engu-18 nangaphezulu. Imvamisa engxoxweni yethu yevidiyo uhlangabezana namantombazane anesithukuthezi akhathele impilo yansuku zonke engwevu.
I-roulette yengxoxo iyisevisi ewusizo kakhulu. Futhi okusungulwe kahle kakhulu abantu abeza nakho sonke isikhathi sokuphila kwabo yigama elithi "mahhala". Kungakho ingxoxo yevidiyo yamahhala ithandwa kangaka. Kuwo wonke amazwe, wonke amadolobha, amadolobhana noma amadolobhana kukhona abafana namantombazane abafuna ukukhulisa isibalo sabangane, futhi mhlawumbe nabangane. Futhi izinkundla zokuxhumana zisanda kuba ngabasizi abangabazekayo. Ngenxa yalokhu, kwenziwa ingxoxo yamahhala yevidiyo. Siyajabula ukwethula lesi simangaliso. Yenza ukujwayelana nathi mahhala. Ungasesha abangane engxoxweni yevidiyo ngaphandle kokukhokha. Okwakho kuphela insizakalo yezokuxhumana engaziwa yokwenza lokho okufunayo.
Ukusakazwa bukhoma kwamakhamera wamahhala
Hlangana namamodeli angahleliwe kungxoxo esheshayo. Ngokuchofoza okulula kwenkinobho, jabulela ingxoxo yamahhala namantombazane nabafana.
Xoxa bukhoma ngevidiyo namantombazane ashisayo, uma ukhathele ukubona abafana, uma uchofoza ngokulandelayo, ungakhetha ukuxhumana kuphela namantombazane.
Ingxoxo yevidiyo yezitabane
Kusukela kwabobulili obufanayo kuya kwabobungqingili, ingxoxo yethu yevidiyo yezitabane iveza abafana abashisayo oseke wababona kunoma iyiphi indawo yezitabane ku-inthanethi.
Bukela ama-Live Cams Mahhala
i-roulette ukuphela kwayo evumela ukuthi uzijwayeze online ngokusakazwa bukhoma kwamakhamera wevidiyo. Njengoba kuyisayithi lamahhala ngokuphelele elingenakubhaliswa, ungaqala ngokushesha ukuxoxa ngevidiyo namantombazane. Amantombazane amaningi kakhulu emhlabeni anokuchofoza okukodwa nje. Ungathola futhi inqwaba yabafana emagumbini ethu okuxoxa. Senze lula isiza ngangokunokwenzeka ukuze ukwazi ukuthola kalula amantombazane nabafana besebenzisa ama-webcams njalo lapho uvakashela
Uyiqagele, i-roulette iyona ebanda kunazo zonke kwi-Intanethi. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuvula ikhamera yakho yewebhu ukuze uqale ukuzijwayeza ikhamera. Ngaphandle kwezingqinamba, azikho amafomu okubhalisa futhi akukho zimali ezifihliwe, ama-webcam ethu amadala wamahhala asebenziseka kalula kakhulu.
Nazi ezinye izinzuzo zokusebenzisa i-roulette:
Bheka usayizi ogcwele izithombe ezinqunu kukhamera mahhala
Kumahhala ngamantombazane ku-webcam ekusakazweni bukhoma
Izipho zethu zamahhala zitholakala amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngeviki.
Jabulela amakhamera wabantu abadala mahhala ngaphandle kwemali efihliwe
Sikwenze kwaba lula impela ukusebenzisa ama-webcam ethu amadala wamahhala ukuze ukwazi ukuhlangana kalula namakhulu amantombazane khona manjalo. Uma ufuna ukuxoxa nabantu ongabazi noma ngabe ufuna ukujabulela ingxoxo yevidiyo yamahhala lapho amantombazane nabafana behlubula khona futhi benze okubonakalayo ngesikhathi sangempela, i-roulette yilokho kanye okufunayo. Dlulisa amehlo bese ukhetha umsebenzi wekhamera yabantu abadala ovumelana nezifiso zakho; noma yini oyidingayo, uzophuma emizuzwini embalwa!
Ingxoxo yevidiyo yamantombazane nabafana
Abafana bazokujabulela ukuhlangana namantombazane ababephupha ngabo kuphela. Abesifazane nabo bazoyithanda, ngoba sinenqwaba yamadoda alinde imicabango yakho yothando ukuthi iphile. Siphinde sibe namakhamu wamahhala wabasebenzisi bezitabane kuphela, okwenza kube lula kubasebenzisi ukuthi bathole ngqo abakufunayo.
Ngabe ukhetha ukuhlala nabantu ongabazi? Uma kunjalo, isici sethu sokuxoxa sizokuvumela ukuthi uthole ukufana okungahleliwe nekhamera yewebhu yentombazane noma ikhamera yewebhu yomfana. Qhubeka uchofoze inkinobho "Okulandelayo" uze uthole ikhamera yewebhu evula wena ngempela. Ngamashumi ezinkulungwane zabasebenzisi be-inthanethi, uzohlala uthola umuntu ozoxoxa naye noma onobudlelwano naye.
i-roulette ikunikeza izingxoxo ezikwenza ube yingxenye ye-movie egcwele isenzo kaninginingi. Ngakho-ke khohlwa ngokubuka ama-movie avamile bese uba yingxenye yawo kunalokho. Kuyiqiniso futhi kuyenzeka manje; khuluma nabantu kwi-webcam bese ulawula ukuthuthuka okuqhubekayo ngokwakho. Ngeke wazi ukuthi kuzokwenzekani ngokulandelayo.
Lesi siza esabantu abadala abaneminyaka engu-18 + kuphela!
KUFANELE UBE NEMINYAKA ENGAPHEZULU KWI-18 KANYE KUFANELE UKUVUMELANE NAMA-TERMS NGALESI:
Le webhusayithi iqukethe imininingwane, izixhumanisi, izithombe namavidiyo wokuqukethwe (ngokuhlangene "Okuqukethwe Kokuqukethwe"). UNGAQHUBEKI uma: (i) ungaphansi kweminyaka engu-18 noma uneminyaka yobudala egunyeni ngalinye lapho uzobuka noma ungabuka okuqukethwe, kunoma yikuphi okukhulu (“iminyaka yobudala”), (ii) njengokuqukethwe kukucasula; noma (iii) ukubuka okuqukethwe akuvumelekile kuyo yonke imiphakathi lapho ukhetha ukukubuka khona.
Uma ukhetha ukungena kuleli sayithi, uyafunga futhi uyasiqonda isijeziso sokuqamba amanga ngokuvumelana ne-28 USC § 1746 neminye imithetho nezimiso ezisebenzayo, lapho zonke lezi zitatimende ezilandelayo ziyiqiniso futhi zilungile
Sengifinyelele eminyakeni yobudala egunyeni lami;
Izinto zemvelo engizibukayo zenzelwe ukuzisebenzisela mina uqobo, futhi ngeke ngiveze izingane ukuthi zibuke le nto;
Ngifuna ukwamukela / ukubuka izinto zokuqukethwe;
Ngikholwa ukuthi njengomuntu omdala kuyilungelo lami lomthethosisekelo elingenakwehlulwa lokuthola / ukubuka okuqukethwe kokuqukethwe;
Ngikholelwa ukuthi ukuya ocansini kwabantu abadala abavumayo akuyona into ecasulayo noma eyihlazo;
Ukubuka, ukufunda nokulanda okuqukethwe kwalolu hlobo akwephuli amazinga kwanoma yimuphi umphakathi, idolobha, idolobha, izwe noma izwe lapho ngizobuka khona, ngifunde futhi / noma ngilande okuqukethwe;
Nginomthwalo wemininingwane engamanga noma imiphumela engokomthetho yokubuka, ukufunda noma ukulanda noma yikuphi okuqukethwe okuvela kuleli sayithi. Ngiyavuma futhi ukuthi le webhusayithi noma izinhlangano ezingaphansi kwayo ngeke zithweswe icala nganoma yimiphi imiphumela yezomthetho evela kunoma yikuphi ukungena ngobuqili noma ukusetshenziswa kwale webhusayithi;
Ngiyaqonda ukuthi ukusebenzisa kwami ​​le webhusayithi kulawulwa yimigomo nemibandela yewebhusayithi engiyibuyekezile futhi ngayamukela, futhi ngiyavuma ukuboshwa yileyo Migomo.
Ngiyavuma ukuthi ngokungena kule webhusayithi, ngiyaziveza mina kanye nanoma iyiphi inhlangano enginayo intshisekelo esemthethweni noma elinganayo ekuphathweni kwami ​​kwe-State of Florida, Miami-Dade County uma kukhona impikiswano eyenzeka nganoma yisiphi isikhathi phakathi kwale webhusayithi, mina no / noma enye inhlangano yebhizinisi;
Leli khasi lesexwayiso lakha isivumelwano esibophezela ngokomthetho phakathi kwami, le webhusayithi kanye / noma yiliphi ibhizinisi enginentshisekelo efanele futhi engafanelekile kulo. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi Sivumelwano kugcinwa kungenakuphoqeleka, okusele kuzophoqelelwa ngokugcwele ngangokunokwenzeka, futhi ukuhlinzekwa okungaphoqeleleki kuzothathwa njengokuchitshiyelwa ngezinga elilinganiselwe elidingekayo ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa kwaso ngendlela esondele kakhulu kunhloso ebekiwe lapha.;
Bonke abadlali bakulesi siza baneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala, bavumile ukuthwetshulwa kanye / noma ukuqoshwa, futhi bakholelwa ukuthi kuyilungelo labo ukuthi benze ucansi oluvunyelwe ukujabulisa nokufundisa abanye abantu abadala, futhi ngikholelwa ukuthi ilungelo njengomuntu omdala lokubukela ngemuva kwezenzo ezinjalo;
Amavidiyo nezithombe ezikulesi sayithi zihloselwe ukusetshenziswa ngabantu abadala abanokwethenjelwa njengezinsiza, imfundo nokuzijabulisa;
Ngiyakuqonda ukuthi kuyicala lobugebengu ukufaka isimemezelo samanga ngaphansi kwesicelo samanga; kanye ne
Ngiyavuma ukuthi lesi sivumelwano silawulwa yi-Global and National Trade Electronic Signature Act (eyaziwa kakhulu ngokuthi “i-Electronic Signature Act), i-15 USC. § 7000, phambili, nangokukhetha okuthi “Ngiyavuma. Ngena lapha "futhi ngokukhombisa ukuthi ngivunyelwe ukuboshwa yimigomo yalesi sivumelwano, ngiyavuma ukuthi isiginesha engezansi yisiginesha yami futhi iwukubonakaliswa kwemvume yami ukuboshwa yimigomo yalesi sivumelwano.
LELI SAYITHI LIHLANGANISANA NOKUQINISEKISWA KOMTHETHO PHANSI KWAZO ZONKE IZIMISO ZOKUSETSHENZISWA NGOKUNGEKHO MTHETHO KWENKONZO, KAKHULU ESIMENI SOKUSETSHENZISWA KWEENKONZO NGABANTU ABANCANE.
Ungayisindisa kanjani ividiyo engxoxweni ye-roulette
Ukuqomisana ku-roulette yengxoxo kwehluka ngezindlela eziningi kwamanye amasayithi afanayo. Isibonelo, uzodinga ukubhalisa ku-Skype. Ukuxhumana nomuntu kuzotholakala kuphela ngemuva kokumfaka ohlwini lwakho loxhumana nabo. Ukuba kumanethiwekhi okuxhumana nabantu kuyakuphoqa ukuthi ugcwalise uhlu lwemibuzo oluthile bese ugunyaza ukusebenzisa inombolo yocingo noma i-imeyili. I-roulette yengxoxo ihluke ngokuphelele kule ndlela yokuxhumana, ngoba ukubhaliswa akudingeki ukuze ujwayelane nensizakalo.
Njengoba ingxoxo yevidiyo ikhethwa izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke, singasho ngokuthandwa kwesayithi. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangafuna ukuthwebula izikhathi zokuxhumana. Ama-hangout akhanya, akhumbuleka kakhulu azokhunjulwa lapho wazi ukuthi uwagcina kanjani.
Ngaphezu kokukwazi ukuqopha ingxoxo nomuntu omuhle, bese uvakashela kabusha, kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele wazi ukuthi ungayilondoloza kanjani ividiyo. Isibonelo, kunezimo ezivamile zokujwayelana nabantu abanezinkinga zengqondo. Bangakusongela, bazame ukukuncenga ukuthi wenze okuthile okungathandeki. Ngobufakazi bokuziphatha okungafanele, ungahambisa irekhodi lokusekelwa. Kulokhu, ikhefu lizothunyelwa ekuvinjelweni.
Futhi, amavidiyo athandekayo angathunyelwa kumanethiwekhi omphakathi noma ku-YouTube. Namuhla, amasayithi amaningi agcwele amavidiyo ahlekisayo noma athinta inhliziyo. Akuyona imfihlo ukuthi abantu bathola imali enhle ngokuthumela ama-video. Uma unemibono eminingi, umholo wakho uyoba mkhulu.
I-algorithm yokuqopha ividiyo
Kungabonakala ngokushesha ukuthi ukuqopha ividiyo yengxoxo kunzima impela. Kodwa-ke, ngisho nomfundi ongenalwazi angabhekana nalokhu, uma wazi i-oda. Okudingayo:
Iya ku-webchat kusuka kwi-laptop noma kwikhompyutha, noma landa uhlelo lokusebenza uye nalo kuselula yakho.
Lungiselela i-webcam yakho nemakrofoni ukuze i-roulette yengxoxo isebenze kahle. Ngaphandle kwalawa madivayisi, uhlelo ngeke luqale, futhi ukuqoshwa kwevidiyo ngeke kusebenze.
Thola bese ulanda uhlelo lokuqopha ividiyo ngomsindo ovela kwi-Intanethi. I-Ashampoo Snap, iSpring Free Cam, iCamStudio nokunye okunjalo kuzokusebenzela.
Qiniseka ukuthi kunesikhala samahhala kwikhompyutha yakho ukugcina ifayela. Kudingeka ubuncane be-1-2 GB.
Ngenkathi uxoxa ngevidiyo, qalisa uhlelo bese uqala ukuqopha ividiyo.
Ungayeka ukuqopha nganoma yisiphi isikhathi. Usayizi wefayela uzoncika ekuxazululeni kwekhamera yewebhu nobude bocingo.